Free Thinker: Living in Singapore XVIII (Taxi)
Living in Singapore XVIII (Taxi)
၇၊ ၅။ တက္ကစီ ဖြင့် ခရီးသွားလာခြင်း လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်ကထိ စင်ကာပူတွင် တက္ကစီ စီးရသည်မှာ အလွန် ဈေးချိုလှပါသည်။ ကမ္ဘာ့ဈေး အချိုဆုံး တက္ကစီများ ထဲတွင် စင်ကာပူမှ တက္ကစီ များလည်း ပါခဲ့ပါ၏။ အဘယ်မျှ ဈေးချိုသနည်း ဆိုသော် အကယ်၍ သူငယ်ချင်း လေးယောက် သွားစရာ ရှိသည် ဆိုပါစို့။ ခရီးသာ သိပ်မဝေး ပါက တက္ကစီဖြင့် သွားခြင်းသည် ဘတ်စ်ကားဖြင့် သွားခြင်း နှင့် စရိတ်စက အတူတူပင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ယခုမူ ဈေးတက် သွားပြီ ဖြစ်ပါ၏။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် စင်ကာပူ၌ ကုမ္ပဏီ ၈ ခုမှ တက္ကစီ အစီးရေပေါင်း ၂၄၀၂၂ ပြေးဆွဲနေပြီး တစ်ရက်လျှင် ခရီးစဉ် ပေါင်း ၆ သိန်း ခန့် ပြေးဆွဲပေး နေပါသည်။ တက္ကစီ တိုင်း၌ မီတာ တပ်ဆင်ထားပြီး ကားခကို မီတာနှင့် မတောင်းဘဲ ကြိုက်သလို တောင်းပါက ကားမောင်းသူကို ဒါဏ်ငွေ ၅၀၀ ထိ တပ်ရိုက်နိုင် ပါသည်။ စင်ကာပူ တက္ကစီများ အားလုံး၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုံးတွင် ရေဒီယို တပ်ဆင်ထား ပါသည်။ ထို့ပြင် ဌာနချုပ်နှင့် GPS (Global Positioning System) မှ သော် လည်းကောင်း၊ စကားပြောစက် မှ သော်လည်းကောင်း တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
စင်ကာပူတွင် အဓိက အားဖြင့် CityCab (အ၀ါရောင်), Comfort (အပြာရောင်), Silvercab (ငွေရောင်), SMART Cabs (အစိမ်းရောင်), SMRT Taxi (အညိုရောင်ဖျော့ဖျော့), TansCab (အနီနှင့် အဖြူကျား) နှင့် Prime (ကြေးနီရောင်) ဟု ပြေးဆွဲနေပါသည်။ ထို့ပြင် တသီး ကုမ္ပဏီမဟုတ်ဘဲ တသီး ပုဂ္ဂလ ပြေးဆွဲနေသော တက္ကစီများ လည်း ရှိပါသေးသည်။ သို့သော် အစီးရေ ၅၀၀ လောက်သာ ရှိပါသည်။
စင်ကာပူ တက္ကစီ မောင်းသူများသည် Land Transport Authority (LTA) ၏ Quality of Service (QoS) (၀န်ဆောင်မှု အရည်အသွေး စံနှုံး) ကို အပြည့်အ၀ လိုက်နာရန် လိုပါသည်။ အကယ်၍ မလိုက်နာ၊ ပျက်ကွက်ခဲ့ ပါက ၎င်း ၏ တက္ကစီ မောင်းခွင့် လိုင်စင်ကို ပြန်သိမ်း နိုင်ပါသည်။ သို့အတွက် စင်ကာပူ တက္ကစီ တော်တော် များများမှာ ၀န်ဆောင်မှု ကောင်းပါသည်။ ခရီးသည်ကို စိတ်ကျေနပ်အောင် ဆက်ဆံကြ ပါသည်။ မိမိ သွားလိုသော လမ်းကို ညွှန်ပြလို့ ရသလို အကယ်၍ မိမိ လမ်းကြောင်း မသိပါက လည်း အတိုဆုံး လမ်းမှ အမြန်ဆုံး ရောက်အောင် မောင်းပါဟု ညွှန်ကြားလို့ ရပါသည်။ သို့သော် ကျသမျှ အားလုံးကို ခရီးသည်ကသာ ပေးဆောင်ရ ပါသည်။
တက္ကစီတွင်း ၌ လည်း အစားမစားရ။ ဒူးရင်းသီး မသယ်ရပါ။ အမြဲ ခါးပတ် ပတ်ထားရန်လည်း လိုပါသည်။
၂၀၀၇ ဒီဇင်ဘာမှ စ၍ တက္ကစီ ဈေးနှုံးများကို ၁၀ ရာနှုံးမှ ၄၉ ရာနှုံးထိ တိုးမြှင့်လိုက်ပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇူလိုင် လတွင် ထပ်တက်ပြန်ပါ၏။ (ဤကဲ့သို့ တက်လိုက် သည့်တိုင် စင်ကာပူသည် အခြား ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများနှင့် ယှဉ်လိုက်ပါက ဈေးသက်သာ နေပါသေး သည်။) တက္ကစီ ဈေးနှုံးများမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါ၏။
ထို့ပြင် ERP (Electronic Road Pricing) ဖြတ်လျှင် ဖြစ်စေ၊ ပိုက်ဆံပေးရသော parking များအတွင်း ၀င်လျှင် ဖြစ်စေ မည်သည့် အတွက်ကြောင့် ကျသင့်သည် ဖြစ်စေ ကျသမျှကို ခရီးသည်က သာ ပေးရပါသည်။ တက္ကစီ တစ်စီးလျှင် ရှေ့ဘက်တွင် တစ်ဦး၊ နောက်ခန်းတွင် ၃ ဦး၊ စုစုပေါင်း ခရီးသည် ၄ ဦး (လူကြီး) သို့မဟုတ် လူကြီး ၃ ဦး + ကလေး ၂ ဦး သို့မဟုတ် လူကြီး ၂ ဦး + ကလေး ၃ ဦး သို့မဟုတ် လူကြီး ၁ ဦး + ကလေး ၄ ဦး သို့မဟုတ် ကလေး ၆ ဦး လိုက်ပါခွင့် ရှိပါသည်။ အသက် ၁၂ နှစ်အောက် ကလေး ၃ ဦး ကို လူကြီး ၂ ဦး နှင့် ညီသည် ဟု တွက်ပါသည်။
တက္ကစီ Booking လုပ်လိုလျှင် 6-3425-222 ကို ခေါ်နိုင် ပါသည်။ အလွယ်မှတ် လိုပါက 6-DIAL-CAB ဟု မှတ်နိုင်ပါသည်။ (လက်ကိုင်ဖုံး key pad ပေါ်မှ နံပါတ်နှင့် ဆိုင်ရာ အက္ခရာများ ဖြစ်ပါ၏)။ ထိုနံပါတ်နှင့် မည်သည့် တက္ကစီကို မဆို ခေါ်နိုင်ပါ သည်။ သို့မဟုတ်ပါက အောက်ပါ နံပါတ်များ ကို ခေါ်နိုင်ပါသည်။ Booking Hotlines
6552 1111 - Comfort Transportation Pte Ltd, CityCab Pte Ltd (ComfortDelgo)
6293 5545 - Yellow Top Taxi (ComfortDelgo)
6555 8888 - SMRT Taxis Pte Ltd
555 3333 - Trans-Cab Services Pte Ltd
6485 7777 - Smart Automobile Pte Ltd
6363 6888 - Premier Taxis Pte Ltd
6778 0808 - Prime Car Rental & Taxi Services Pte Ltd 6552 2828 - Comfort Premier Cabs
သို့မဟုတ် တယ်လီဖုံး message ပို့၍လည်း booking လုပ်နိုင်ပါ၏။ message ပို့ပုံပို့နည်းမှာ -
Ref: 1. http://www.smrtbuses.com.sg/transport/bus/story.htm
၇၊ ၆။ ခရီးသွားများ သိသင့်သိထိုက်သည့် အချက်အလက်များ
စင်ကာပူမှ ခြေလျင် ခရီးသည်များ သွားလာရန် ခင်းပေး ထားသော ပလက်ဖောင်းများ မှာ အလွန် အဆင်ပြေ ပါသည်။ ကားလမ်းနှင့် လူသွားလမ်း ပလက်ဖောင်း စပ်ကြားတွင် အထစ် ဖြစ်မနေပဲ ဆင်ခြေလျှော လုပ်ပေး ထားသဖြင့် လက်တွန်းလှည်း၊ ဘီးတပ် ကုလားထိုင်၊ စက်ဘီး များအတွက် သာမက လမ်းလျှောက်ခြင်း အတွက် ပါ အဆင်ပြေပါ၏။ ထို့ပြင် လူသွားလမ်း ပလက်ဖောင်း များမှာလည်း လမ်းလျှောက်ရန် လုံလုံ လောက်လောက် ကျယ်ပြန့် ပါသည်။
များစွာသော နေရာများတွင် ကားလမ်းကူးရန် လူကူး တံတားများ၊ မြေအောက် လမ်းများ ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် မီးပွိုင့် များတွင်လည်း လူကူးရန် အချက်ပြ မီးစိမ်း၊ မီးနီများ ရှိပါသည်။ လူကူး မီးစိမ်းပြမှ လမ်းဖြတ် ကူးခြင်းသည် အန္တရာယ် ကင်းပါ၏။ မီးစိမ်းပြရန် မီးပွိုင့်မှ လူကူးမီး ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ မီးနီခါနီး နောက်ဆုံး တစ်စက္ကန့် အလိုကျမှ အတင်း ဖြတ်ပြေး ကူးခြင်းမျိုး မလုပ်သင့်ပါ။ လူကူး မျဉ်းကြားမှ ကူးသည့်တိုင် ကား အသွားအလာ ကို ကြည့်ပြီးမှ ကူးသင့်ပါသည်။
ဘတ်စ်ကား နှင့် ရထားများပေါ်တွင် Priority Seat (ဦးစားပေး ထိုင်ခုံ) ဟု ရှိပါသည်။ ထို ထိုင်ခုံများကို အသက် အရွယ် ကြီးရင့်သူများ၊ ကိုယ်ဝန် ဆောင်များ၊ မသန် မစွမ်းများ၊ ကလေးများ၊ အထုပ်အပိုး ပါသူများအား ဦးစား ပေးရ ပါမည်။
ရထား ပေါ်တက်လျှင် ဆင်းသူများကို အရင် ဦးစားပေးရ ပါမည်။ ရထား တံခါးပေါက်ဝ တွင် ပိတ်ရပ် မနေရပါ။ Waiting Line များ၏ အပြင်မှ စောင့်ရ ပါမည်။
စက်လှေခါး စီးသော အခါတွင် ဘယ်ဘက် ကပ်စီးရပါမည်။ ကျော် တက်လိုသူ များ ညာဘက်မှ ကျော်တက်နိုင်စေရန် ဖြစ်ပါ၏။ စက်လှေခါး မတော်တဆ ဖြစ်ပါက ထိခိုက် ဒါဏ်ရာ မရစေ ရန် စီးသည့် အခါ လက်ကိုင်တန်း များကို ကိုင်ထားရန် လိုပါသည်။
ဓါတ်လှေခါးများ စီးသောအခါ တစ်ခါတရံ ဓါတ်လှေခါး ပျက်သောအခါ အထဲတွင် ပိတ်မိနေ တတ်ပါ သည်။ ထို အခါ မျိုးတွင် တံခါးကို အတင်းဖွင့်ရန် မကြိုးစားပါနှင့်။ ထိတ်လန့်စရာလည်း မလိုပါ။ မိမိတွင် ဖုံးပါ ပါက ဓါတ်လှေခါး အတွင်းပိုင်း တွင် အရေးပေါ် ဖုံးနံပါတ်ကို ခလုတ်များ အပေါ်ပိုင်းတွင် ပြထားပါသည်။ ထိုနံပါတ်ကို ခေါ်ပြီး မိမိ ရောက်နေ ရာ အဆောက်အဦး နံပါတ်၊ ဓါတ်လှေခါး နံပါတ်တို့ကို ပြောပြ သတင်းပေး နိုင်ပါသည်။ သူတို့ လာဖွင့်ပေးပါလိမ့်မည်။ သို့ မဟုတ်ပါကလည်း ဓါတ်လှေခါး များ အတွင်း၌ ခေါင်းလောင်း (bell) များ တပ်ထားသဖြင့် ခလုတ်နှိပ်ကာ မိမိ ပိတ်မိနေ ကြောင်း အပြင်မှ လူများကို အသိပေးနိုင်ပါသည်။
ကိစ္စရှိပါက အရေးပေါ် ခေါ်နိုင်သော နံပါတ်များမှာ Police – 999, မီးသတ် နှင့် အရေးပေါ်ယဉ် - 995 တို့ ဖြစ် ပါသည်။
တက္ကစီ စီးသောအခါတွင် ခါးပတ် ပတ်ထားရန် လိုပါသည်။ တက္ကစီခကို ပိုက်ဆံဖြင့် ပေးချေနိုင်သလို ဘဏ်ကဒ် ရှိပါက ဘဏ်ကဒ်ဖြင့် (NETS) ပေးချေ နိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် cash card ယခုအခါ အသစ် ထုတ်ပေးထား သော CEPPAS ကဒ်ဖြင့် ပေးနိုင်ပါသည်။
အမှိုက်များကို ပစ်စလက်ခတ် မပစ်ရသလို တံတွေးကိုလည်း ဟိုထွေး သည်ထွေး မထွေးရပါ။ အမှိုက်ပုံး များကို နေရာတိုင်းတွင် (ပန်းခြံများ အပါအ၀င်) ထားပေး ထားပါသည်။ အစားအသောက် ကိုလည်း နေရာတိုင်းတွင် စားလို့ မရပါ။ စားမည်ဆိုလျှင် ကန့်သတ်ထား သော နေရာ ဟုတ်မဟုတ် အရင် လေ့လာရ ပါမည်။ အထူးသဖြင့် ဆေးလိပ် သောက်ခြင်း ဖြစ်ပါ၏။ မည်သည့် နေရာများတွင် ဆေးလိပ် မသောက်ရ ဆိုသည်ကို လေ့လာ ထားရန် လိုပါမည်။ စင်ကာပူတွင်း တရားဝင် ရောင်းချသော ဆေးလိပ်မှလွဲ၍ အခြား ဆေးလိပ်များ မသောက်ရပါ။ တရားမ၀င် ဆေးလိပ်များကို သောက်ခြင်း၊ သယ်ဆောင်ခြင်း၊ ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားခြင်း များအတွက် ဥပဒေ နှင့် သတ်မှတ် ထားပါသည်။
Living in Singapore XIX (Shopping)
Living in Singapore XVII (Trains3)
Living in Singapore XVI (Trains2)
Living in Singapore XV (Trains)
Living in Singapore XIV (Buses)
Living in Singapore XIII (Ez link Card)
Living in Singapore XII (Travelling)
Working in Singapore Part XXII (Hunting A New Job4...
Working in Singapore Part XXI (Hunting A New Job3)...
Working in Singapore Part XX (Hunting A New Job 2)...
Working in Singapore Part XIX (Hunting A New Job)
Living in Singapore XI (Religion)
Living in Singapore X (University)
Living in Singapore IX (Singapore Poly)
Living in Singapore VIII (Temasek Poly)
Living in Singapore VII (ITE Education)
Living in Singapore VI (Secondary Education)
Living in Singapore V (Primary Education)
Living in Singapore IV (Pre School)
Living in Singapore III (Race,Language and Governm...
Living in Singapore II (Geography and Climate)
Living in Singapore I (Facts and Figures)
Working in Singapore Part XVIII
Working in Singapore Part XVII
Working in Singapore Part XVI
Working in Singapore Part XV
Working in Singapore Part XIV